Apartment Casa de la Montana - I-Airbnb
Iflethi yonke sinombuki zindwendwe onguIrène
I-100% yeendwendwe zakutshanje inike uIrène iinkwenkwezi eziyi-5 kunxibelelwano.
Indawo yokuhlala ibekwe ngokufanelekileyo, umbono ogcweleyo wolwandle, uzolile kakhulu. ihlaziywe ngokupheleleyo, ikhululekile. Kufuphi kuzo zonke izinto eziluncedo: ibha kunye nevenkile yokutyela engaphantsi kwe-1 km kude, zonke iintlobo zeevenkile, iibhari kunye neeresityu kumgama oyi-1.5 km kude. Olona lwandle lukufutshane lukumgama oziimitha ezingama-200 (i-cove entle). Ulwandle olukhulu olunesanti kumgama ozimitha ezingama-700.
Amagumbi amabini amakhulu kakhulu (55 m2) alungiswe ngokupheleleyo kwaye anefenitshala entle. Isebenza kakuhle kwezi ntsuku, inokuhlala abantu abayi-2 ukuya kwabayi-4. Ithala elihle kakhulu elijongene nolwandle. Umgama wokuya elunxwemeni (200 m).
Ukupaka phambi kwendlu. Umatshini wokuhlamba impahla okhoyo egaraji (uza kusetyenziswa nenye iflethi okanye indlu ekwicomplex)
4.62 out of 5 stars from 41 reviews
4.62 · Izimvo eziyi-41
ibekwe kumgama oziimitha ezingama-200 ukusuka kwindawo enokufikelela ngokulula kakhulu, iimitha ezingama-700 ukusuka kunxweme olukhulu olunesanti kunye nebha / yokutyela. I-1.5km ukusuka kumbindi weBolnuevo (ivenkile enkulu, ikhemesti, iivenkile ezahlukeneyo, iibhari, iindawo zokutyela ....)
Umbuki zindwendwe ngu- Irène
Andihlali kwisiza kodwa ndiyafumaneka kubaqeshi ngefowuni kunye / okanye i-sms